Brunei:Soritroritr’ ‘Ali Baba’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2008 18:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, Español, বাংলা, 日本語, English
Maro ny toeram-pivarotana manohy mivoha hatrany saiky amin’ny faritra maro ao Brioney. Mba hahafantaranao azy mialoha, haka toeram-pisakafoanana iray vaovao isika, dia toeram-pisotroana dité sy kafe iray vaovao, toeram-pivarotana kojakojan-tokantrano iray vaovao, na toeram-pandraharahana ara-barotra goavana iray vaovao, raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Fanampin'izay, ny ankamaroan'ireny fandraharahana ireny dia ny Maley Broneianina no mitazona azy – foko maro an'isa indrindra eto amin'ny firenena. Entina hanaporofoana izany fa tsy sahirana velively ny Maley mitady vola ho entin-manomboka asa fandraharahana iray, na ny fananana fahaiza-manao mba ho lasa mpandraharaha. Indrisy anefa, na dia miroborobo aza ny fandraharahana anatiny natsangan'ireo Maley, ny ankabeazan'izy ireny dia tsy ny tompony no manodina azy. Lazain'i Rouge economist io tranga io hoe toy ny soritroritr’ ‘Ali Baba’ :
Raiso ho ohatry ny soritsoritr'‘Ali Baba’ ny sehatry ny fandraharahana. Te-hanan-karena amin'ny fomba mora sady malaky be isika. Raha tokony isika no hanodina ny orinasa dia lasa mivarotra na mampanofa ny fanomezan-dalantsika amin'ny olona avy any ivelany. Vokany, Tsy mihoatra ny rantsan-tanana folo ny isan'ny Maley Brioneiana izay lasa mpandraharaha azontsika ireharehana raha ampitahaina amin'ny isan'ny toeram-pandraharahana ara-barotra (indrindra ny ‘kedai runcit’, ny trano fanetezana ary ny mpanjaitra). [‘Kedai runcit’ no iantsoana ny fivarotana enta-madinika]
Sary avy amin'i Anak Brunei
Ny governemantan'ny Brioney dia miezaka ny haha-marolafy ny toe-karem-pirenena amin'ny alalan'ny fandrisihana sy fampivoarana ny harena ara-olona. Tsy hahomby anefa izany hevitra sy tetik'asa fampandrosoana izany raha tsy mivoatra ny olona. Ny kolo-tsaina Broneianina ihany koa dia efa sakana manohitra ny ezaka fampandrosoana ny toe-karena. Ny Rouge Economist ohatra dia manoritsoritra ny toe-tsain'ny Maley broneianina any am-piasana:
Ohatra hafa no maneho ny toe-tsain'ny Maley broneianina any am-piasana. Tafiditra ao anatin'ny kolo-tsain'ny fitantanana ny fiatoana misotro dite amin'ny dimy ora. Ny toetran'ny ‘karang tah’ [translation: “Amin'ny manaraka angamba”, na “Hataoko io aoriana kely ao.”] no nahatonga ny governemanta very dollars an-tapitrisany maro eo amin'ny sehatry ny famokarana ary teo amin'ny fampidiram-bola. Vokatr'izany, ny raharaham-bahoaka, izay asa tena voalohan-tsafidin'ny Brioney Maley, dia milona, tsy mamokatra sy tara ka indraindray aza dia herinandro maro no isaina izay vao mahatonga taratasy any amin'ny distrika kely iray, ary amam-bolana vao mahazo valiny ny fangatahana iray. (Oadray, izany ve no samy taritary avy any an-tanàna?)
Noho izany dia zava-dehibe loatra ho an'ny Brioney ny manorina tontolo afaka handrisika ny Maley manokana hamokatra bebe kokoa sy ny Broneianina rehetra amin'ny ankapobeny. Raha tsy mivoatra ny vahoaka mpanodika ireny seha-pihariana ireny dia mbola nofinofy lavitra dia lavitra ny fandrosoana.